ခြောက်သွေ့သောမော်တာစက်ရုံ၊ လိုက်ဖက်သောစက်ကိရိယာများ၊ ပီစီကိရိယာ - Shantui
1. အဆင်ပြေသောတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ဖြုတ်တပ်ခြင်း၊ အကူးအပြောင်းမြင့်မားခြင်း၊ အဆင်ပြေလွယ်ကူမြန်ဆန်ခြင်း၊ ကျစ်လျစ်ပြီးကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ မြင့်မားသောပုံစံဒီဇိုင်း၊ 3. စစ်ဆင်ရေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ပြီးစွမ်းဆောင်ရည်တည်ငြိမ်သည်။ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုနည်းပါးခြင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုမြင့်မားခြင်း၊ ၅။ လျှပ်စစ်စနစ်နှင့်ဓာတ်ငွေ့စနစ်သည်အဆင့်မြင့်ပြီးမြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှုဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်။ ရွေ့လျားကွန်ကရစ်ရောစပ်စက်ရုံသည်ပစ္စည်းသိုလှောင်ခြင်း၊
1. အဆင်ပြေသောတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ဖြုတ်တပ်ခြင်း၊ အကူးအပြောင်းမြင့်မားခြင်း၊ အဆင်ပြေလွယ်ကူမြန်ဆန်ခြင်း၊ ကျစ်လျစ်ပြီးကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ မြင့်မားသောပုံစံဒီဇိုင်း၊ 3. စစ်ဆင်ရေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ပြီးစွမ်းဆောင်ရည်တည်ငြိမ်သည်။ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုနည်းပါးခြင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုမြင့်မားခြင်း၊ ၅။ လျှပ်စစ်စနစ်နှင့်ဓာတ်ငွေ့စနစ်သည်အဆင့်မြင့်ပြီးမြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှုဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်။ သတ်မှတ်ချက်စနစ် SjHZS025Y SjHZS040Y SjHZS050Y SjHZS075Y သီအိုရီဆိုင်ရာကုန်ထုတ်စွမ်းအားm³ / h 25 40 50 ...
အင်္ဂါရပ်များ ၁။ ဖောင်ဒေးရှင်းအခြေခံဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ စက်ကိရိယာကိုလုပ်ငန်းခွင်နေရာညှိပြီးခိုင်မာစေပြီးနောက်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ အုတ်မြစ်ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရုံသာမကတပ်ဆင်မှုလည်ပတ်မှုကိုလည်းတိုစေမည်ဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်၏ 2.The modular ဒီဇိုင်းကအဆင်ပြေလွယ်ကူမြန်ဆန်စွာနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစေသည်။ 3. ယေဘုယျကျစ်လစ်သိပ်သည်းဖွဲ့စည်းပုံ, မြေသိမ်းပိုက်လျော့နည်း။ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် Mode SjHZN025F SjHZN040F SjHZN050F SjHZN075F SjHZS050F SjHZS075F SjHZS100F SjHZS150F The ...
သွင်ပြင်လက္ခဏာများစက်ရုံသည်သုတ်ခြင်းစနစ်၊ အလေးချိန်စနစ်၊ အရောအနှောစနစ်၊ လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်၊ အဆုတ်ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်စသည်ဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားခြင်း၊ အမှုန့်များ၊ အရည်ထပ်ပေါင်းများနှင့်ရေများကိုစက်ရုံမှအလိုအလျောက်ချိန်ညှိနိုင်သည်။ Aggregates မ်ားကို front loader မှစုစုပေါင်းဘင်အဖြစ်သို့တင်ခဲ့သည်။ အမှုန့်ကို silo မှနေ၍ ဝက်အူပို့စက်ဖြင့်အလေးချိန်သို့ပို့သည်။ ရေနှင့်အရည်ထပ်ပေါင်းများကိုချိန်ခွင်သို့တင်ရသည်။ အလေးချိန်စနစ်အားလုံးသည်အီလက်ထရောနစ်အကြေးများဖြစ်သည်။ စက်ရုံသည်အလိုအလျောက် ...
Shantui Janeoo Machinery Co. , Ltd. သည်အစိုးရပိုင်အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်ကွန်ကရစ်ရောစပ်ခြင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစက်ကိရိယာများအတွက်အစောဆုံးထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာမဟာဗျူဟာမိတ်ဖက်၊ CREC၊ CRC၊ အဓိကကွန်ကရစ်ရောစပ်စက်ရုံ၊ ကတ္တရာရောနှောစက်၊ ခြောက်သွေ့သောမော်တာ စက်ရုံ၊ အဆင့်မြင့်စီးပွားရေးရောနှောထားသောစက်ရုံ၊ ကားဆွဲစုပ်စက်၊ အမှိုက်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းနှင့်အမျိုးမျိုးသောရောနှောစက်များ။
ဆောက်လုပ်ရေးကာလ - အောက်တိုဘာ ၂၀၀၀ အသုံးချနယ်မြေ (အင်ဂျင်နီယာအမျိုးအစား) - မြို့ပြဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းအမျိုးအစား - ကွန်ကရစ်ရောစပ်ခြင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းအသုံးပြုခြင်း။ ။ ၂၀၂၀၊ အောက်တိုဘာ ၉ ရက်၊ ရက်ပေါင်းများစွာဝေးလံခေါင်သီသောတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်လမ်းညွှန်မှုများအပြီးတွင် Shantui Janeoo Marine SjHZS75-3E ကွန်ကရစ်ရောစပ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများသည်အောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ခဲ့သည်။ ။
ဆောက်လုပ်ရေးအချိန် - စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀ လျှောက်လွှာနယ်ပယ် (အင်ဂျင်နီယာအမျိုးအစား) - စိုက်ပျိုးရေး၊ သစ်တောနှင့်ရေထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးပစ္စည်းအမျိုးအစား - ကွန်ကရစ်အရောအနှောပစ္စည်းများ SjHZS90-3B ဘိလပ်မြေ silo သည်ဖောက်သည်ဟောင်းများ၏ silo ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုခြင်း 2020 ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာလတွင် Shantui J ၏ SjHZS090-3B ကွန်ကရစ်သုတ်စက်ရုံနှစ်ခု ...
Shantui Janeoo အဏ္ဏဝါကွန်ကရစ်အရောအနှောစက်ရုံ SjHZS75-3E သည်အောက်တိုဘာ ၉၊ ၂၀၂၀ တွင်မိုးသည်းထန်စွာစီးဆင်းမှုကိုအောင်မြင်စွာပြီးစီးနိုင်ခဲ့သည်။ ရက်ပေါင်းများစွာဝေးလံခေါင်ဖျားသောလမ်းညွှန်မှုဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံဖောက်သည်များ၏တန်ဖိုးကိုဖန်တီးရန်လမ်းဖွင့်ပေးသည်။ ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေအရ ၀ န်ဆောင်မှုအင်ဂျင်နီယာသည် ...
Shantui Janeoo သည်အသုတ်လိုက်စက်များနှင့်ရောထွေးကုန်တင်ကားများကိုပြည်ပသို့အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်
မကြာသေးမီက Shantui Janeoo 2XSjHZS120-3B ကွန်ကရစ်သုတ်သည့်စက်ရုံနှင့် ၁၂ စတုရန်းမီတာရှိသောကွန်ကရစ်ရောနှောကုန်တင်ယာဉ် ၁၀ စီးကိုဖိလစ်ပိုင်သို့အောင်မြင်စွာပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးမနီလာ၏ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းကိုကူညီရေးခရီးစဉ်မကြာမီစတင်တော့မည်ဖြစ်သည်။ ဖြန့်ဝေသည့်နေရာတွင် ...
Shantui Janeoo Shiheng Canggang မီးရထားလမ်းဖောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်း
မကြာသေးမီက Shiui-Canggang အဝေးပြေးရထားလမ်းဆောက်လုပ်ရေးအတွက် Shantui Janeoo အသုံးပြုသော SjHZS240-3R ကွန်ကရစ်အရောစက်ရုံခြောက်စုံကိုတပ်ဆင်ပြီးဖောက်သည်များအားအောင်မြင်စွာသယ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ပစ္စည်းကိရိယာအားလုံးသည်စာရွက်ဘိလပ်မြေ silo ဖွဲ့စည်းပုံကိုအသုံးပြုထားပြီးပစ္စည်းတစ်ခုစီသည် ...